Apple ga-akwụ Qualcomm na-erughị $ 4,500 ijeri | Gam akporosis
Oké mgbaghara: Apple ga-akwụ Qualcomm adịghị ihe na-erughị $ 4,500 ijeri
Naanị mgbe anyị chere na ọgụ iwu n'etiti Apple na Qualcomm ga-adịgide ogologo oge, ụlọ ọrụ abụọ ahụ kwupụtara na mberede na nkwekọrịta ruru.
Na nkebi nke abụọ gị, Qualcomm kpughere na ọ ga-enweta opekata mpe $ 4,500 site na Apple, dị ka akụkụ nke nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ụlọ ọrụ. Ọ bụ ụdị mgbaghara sitere na Apple, dịkwa oke ọnụ.
Nkwekọrịta dị n'etiti Apple na Qualcomm bụ ihe ịtụnanya nke si n'ụgbọ mmiri pụta na esemokwu dị n'etiti ndị ọrụ ntanetị abụọ ahụ.
Dị ka akụkọ Bloomberg gosipụtara, Apple kwubiri na modem Intel (nke Apple na-eji n'oge na-adịbeghị anya n'ihi agha ya na Qualcomm) agaghị adị njikere maka oge 5G iPhone, nke mere ka Apple kweta ịkwụ ụgwọ dị n'etiti 4.5 na 4.7 ijeri dollar iji kwụọ ụgwọ Qualcomm.
Ọnụ ego a bụ naanị maka nkwekọrịta ahụdị ka Apple ga-anọgide na-akwụ ụgwọ ụgwọ maka iji modem Qualcomm na ngwaọrụ ọ bụla n'ọdịnihu.
Banyere Apple, ọtụtụ ijeri ya azụtala nzukọ ahụ nkwekọrịta afọ ise zuru ụwa ọnụ na Qualcomm, yana nhọrọ iji gbakwunye ya maka afọ abụọ ọzọ mgbe nke ahụ gasịrị. Nke a na - egosipụta nsogbu iwu na chipmaker.
Snapdragon 865 ga - akwado ụdị HDR10 + Qualcomm ọhụrụ
Nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa maka Apple, nyere nke ahụ na Intel wepụrụ ahịa maka 5G modem maka ekwentị, Qualcomm bụ naanị nhọrọ dịnụ n'oge a. Nke a pụtara na ọ bụ ihe kpatara Apple ji họrọ ikpezi ụlọ ikpe, ebe o nwere akụnụba iji were ikpe ahụ ruo ọgwụgwụ.
Mkpokọta nke Apple na-enyefe agaghị eme ihe ọ bụla iji merụọ ụlọ ọrụ ahụ, dịka a na-akọ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe dịka ijeri $ 225.4 na ego aka, wepu ihe ozo gi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oké mgbaghara: Apple ga-akwụ Qualcomm adịghị ihe na-erughị $ 4,500 ijeri
Ga-abụrịrị naanị onye na-aghọtaghị akụkọ ahụ ma ọ bụ na ị bụ nwa nwoke na-amasị gị ịchọrọ ịgha ụgha ...
Kwụ ụgwọ nke ego ahụ bụ ihe Apple ji Qualcomm ụgwọ n'ihi na n'oge ikpe ọ jụrụ ịga n'ihu na-akwụ ụgwọ. Naanị ihe ọ kwụrụ bụ ụgwọ kemgbe mbido ikpe Hadda ugbu a. Ọ B agreementGH agreement nkwekọrịta akụ na ụba, ọ bụ ịkwụ ụgwọ nke iwu ji gị ụgwọ karịa ma ọ bụ obere
IDC ga-ewelite ọnụ ọgụgụ mbupu Xiaomi maka Q2019 XNUMX izu na-abịa
Samsung kwadoro na ọ na-arụ ọrụ na igwefoto jikọtara n'okpuru ákwà